Ukuphupha Ngelindle Lomntu | Oko Kuchukumisa, Kwindlu yangasese kunye neMoles
kuqala » Amaphupha » Phupha malunga nelindle lomntu
Phupha malunga nelindle lomntu Isenokubonakala ingaqhelekanga, kodwa kukho nabo banalo eli phupha.
Amaphupha azele ziintsingiselo kunye nemiyalezo evela kwi-subconscious yethu.
Sihlala sivuka sinexhala lokufumanisa ukuba amaphupha ethu anayo nayiphi na intsingiselo efanelekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla.
Xa siphupha ngeemeko ezingathandekiyo njengelindle lomntu, sikholelwa ukuba inokuba luphawu lwento embi ezayo. Kodwa ngaphandle kwamaphupha esicinga ukuba awakholisi mabi ngokwenene.
Ukuba uphupha indle yomntu, yazi ukuba ibonisa i-harbinger yethamsanqa kunye nobuninzi obuzayo ebomini bakho. Ngoku lixesha lokutyala imali kwaye wenze inzuzo ngokwasezimalini.
Amaphupha apho kuvela ilindle lihlala liluphawu fortuna e iingeniso, oko kukuthi, kubonisa ithamsanqa elinxulumene nokuzuza izinto eziphathekayo.
Nangona kusenokubonakala ngathi liphupha elingemnandanga, yazi ukuba eneneni kuluncedo kakhulu kwaye kukubonisa ukuba uya kubanethamsanqa ngokwasemalini. Thatha ithuba lethamsanqa ukucinga ngalo utyalo-mali kunye notyalo-mali lwemali.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ilindle lomntu?
Maninzi amaphupha anxulumene nelindle, akunjalo?
Njengoko unokucinga, iphupha ngalinye linentsingiselo yaye ngalinye lidlulisela umyalezo owahlukileyo kuxhomekeka kwindlela elikuwo ngayo.
Kule meko ukuphupha ilindle lomntu kunokuba neentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo. ngokohlobo lwephupha.
Ukuze uqonde ngcono… Ukuphupha ubamba ilindle lomntu kunentsingiselo eyahluke ngokupheleleyo ekuphupheni ubona ilindle kwindlu yangasese.
Ngaba uye waqonda?
Kungenxa yesi sizathu ukuba silungiselele ngaphantsi kwawo onke amaphupha anokwenzeka.
Zibone zonke kwaye ujonge kube kanye kwaye wonke umyalezo iphupha lakho lizame ukukudlulisela kuwe!
Iphupha lokubamba ilindle lomntu
Ukuba ephupheni lakho ubambe okanye ubambe ilindle lomntu nangayiphi na indlela, yazi ukuba le yi uphawu lokuthatha umngcipheko kunye nokutyala inkunzi yakho kutyalo-mali oluthile lwemali.
Ukuba uceba ukuthenga ipropati, eli lixesha elifanelekileyo lokwenza oko.
Nokuba ukhetha luphi na utyalo-mali, uya kuvuna imivuzo emihle kuyo.
Ikwalixesha elilungileyo lokuvula ishishini lakho, ukuba sisicwangciso sakho eso.
Eli lixesha lokwakha ubutyebi bakho.
Phupha ngelindle lomntu kwindlu yangasese
Ukuphupha indlu yangasese emdaka enelindle lomntu kubonisa ukuba ubomi bakho bemali buya kuphucula kakhulu.
Enye ingcaciso enokwenzeka kukuba wena akasakwazi ukunceda abantu, osoloko esiza neemfuno oziqwalaselayo ngaphezu kwezakho.
Zibeke wena kuqala kwaye ucinge ngeemfuno zakho phambi kwabanye.
Ukuzicingela ngokwakho akuzicingeli, emva koko, awuyi kukwazi ukunceda abanye ukuba awulungile kuwe.
Xa zonke iimfuno zakho zizalisekile, uya kuba nexesha lokuhlangabezana noko abanye abantu bakufunayo kuwe. Thatha ixesha lokufuna ubumfihlo obukhulu, inkathalo enkulu ngokwakho.
Phupha ulindle lomntu elithambileyo
Ukuba uphupha indle yomntu ethambileyo okanye engamanzi, oko kubonisa ukuba unokufumana imali eninzi, kodwa kuya kufuneka ulumke malunga nokuchitha ngaphezulu.
ukuba awuyazi jongana nobomi bakho bemali kwaye ulawule iindleko zakho kakuhle, nayiphi na inzuzo yamva nje oyenzayo iya kulahleka ngokukhawuleza.
Thatha ixesha lokufumana imali, kodwa ungayisebenzisi kwizinto ezingeyomfuneko kunye nobunewunewu.
Ukuba unako, faka iimali zakho kugcino olungqongqo kunye notyalo-mali.
Ukuphupha ilindle lomntu ngobuninzi
Ukuphupha ilindle ngobuninzi kunye nesixa esikhulu sikwabonisa ubuninzi bemali ebomini bakho.
Uya kudlula kwixesha elizele ngamathuba emali, ke lixesha elifanelekileyo lokucinga malunga nokutyala imali.
Amaphupha elindle ngobuninzi kakhulu angabonisa ingeniso yemali ngesiquphe: nokuba lilifa okanye yimali yokungcakaza.
Phupha malunga nenombolo yethamsanqa yomntu ilindle
Kuqheleke kakhulu ukuba emva kwephupha elizele iintsingiselo abantu bajonge amanani ethamsanqa ukubheja kumdlalo.
Nangona kunjalo, amaphupha elindle lomntu akanalo nawaphi na amanani ethamsanqa.
Nangona ukuphupha malunga neentyantyambo kubonisa inhlanhla kwindawo yezemali yobomi bakho, akukho budlelwane kunye nayiphi na inombolo yokubheja.
Ukuphupha ilindle lomntu elinuka kakhulu
Nangona isenokuba liphupha elingemnandanga, ukuphupha ilindle lomntu elinuka kakubi libonisa amathuba amahle okufumana imali eyongezelelweyo.
Kukho amathuba amahle okuba uya kufumana imisebenzi enokunyusa umvuzo wakho wenyanga.
Ukuba sele unorhwebo, ke iphupha elinjalo libonisa ukuphuculwa kweenzuzo kunye nokunyuka kweentengiso.
Ukuba awuphangeli, zilungiselele kuba kungekudala uza kufumana umsebenzi omtsha. Yonwabela isigaba esihle kwaye ufumane imali eninzi!
uphuphe ulale ebhedini
Nangona iliphupha elingemnandanga, ukuba uphuphe ukuba uzindle ebhedini, liphupha uphawu lwemali eninzi.
Okukhona likhulu inani lezitulo esililini lakho, kokukhona liya lisiba likhulu.
Thatha ixesha lokutyala imali yakho.
Ikwalixesha elilungileyo lokuba ufumane imali eyongezelelweyo.
Ukuphupha uzingcolisile esidlangalaleni
Isenokuba liphupha elihlazo kakhulu, kodwa ukuphupha uzikhulula esidlangalaleni kuluphawu lwempumelelo enkulu yemali.
Ukuba awuphangeli, ngoku lixesha elifanelekileyo lokufumana umsebenzi omtsha.
Ukuba awonelisekanga ngumvuzo wakho, ngoku lixesha lokuba ucele umphathi wakho ukuba anyuswe kakhulu.
ezothusayo ezilungileyo zemali baza kuza.
Ukuphupha ubona ilindle lomntu esidlangalaleni
Ukuba uphuphe ukuba ubona ilindle lomntu esitratweni okanye kwindawo kawonkewonke (oko kukuthi, naphi na ngaphandle kwekhaya lakho) sisilumkiso sethamsanqa kwimidlalo.
thatha umzuzu ukuze indawo yokubheja.
Musa ukubeka ukubheja ngemali eninzi: iimali ezincinci ziya kukunika iziphumo ezilungileyo.
Ukuba awungomlandeli wemidlalo, kodwa uyazi umntu othanda ukungcakaza, yibani kunye naloo mntu xa bebheja: uya kuzisa naloo mntu amathamsanqa.
Ukuphupha ungcolile ilindle lomntu (eyakho okanye yomnye umntu)
Ukuba uphuphe umdaka ulindle lomntu (inokuba lindle lakho okanye ilindle lomnye umntu) oko kuthetha ukuba uziva uneentloni ngento oyenzileyo.
Isenokuba yimeko ekwenza ungakhululekanga okanye imeko ozisolayo ngayo.
Eli phupha linokuba sisilumkiso kwi-subconscious yakho ukuze uphonononge isimo sakho sengqondo kunye nento onokuthi uyitshintshe ukuze ungenzi iimpazamo kunye nezenzo ezikuhlazileyo.
Eli lixesha elihle lokubonisa kwaye ubone ukuba yeyiphi indlela onokuthi uyitshintshe.
Ngaba eli phupha lihlala lineentsingiselo?
Usenokuba uqaphele ukuba sinika iintsingiselo ezininzi ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwiphupha ukuphupha.
Kule meko, ukuba iphupha lakho lalifana ncakasana nakweyiphi na echazwe ngasentla, jonga nje intsingiselo yalo ngokuqinisekileyo, kodwa ukuba uphuphe into eyahlukileyo ngokupheleleyo kwinto evezwayo, kunokwenzeka ukuba inenye intsingiselo.
Sikholelwa ukuba sipapashe ezona zibalulekileyo, ke funda nje lonke inqaku ukuze uqonde umyalezo wonke emva kweli phupha.
Ukuphupha ubaleka umntu
phupha ngenyama yehagu
Ngoku uyazi ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha ilindle lomntu kuba lula ukuqonda umyalezo wephupha lakho.
Siyazi ukuba usenokuba uphuphe into eyahlukileyo, kodwa ukuba oko kwenzekile, phawula nje ngeli nqaku.
Siza kuchaza nayiphi na intsingiselo oyifunayo, phawula nje!
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ilindle lomntu?
1.1 Iphupha lokubamba ilindle lomntu
1.2 Phupha ngelindle lomntu kwindlu yangasese
1.3 Phupha ulindle lomntu elithambileyo
1.4 Ukuphupha ilindle lomntu ngobuninzi
1.5 Phupha malunga nenombolo yethamsanqa yomntu ilindle
1.6 Ukuphupha ilindle lomntu elinuka kakhulu
1.7 uphuphe ulale ebhedini
1.8 Ukuphupha uzingcolisile esidlangalaleni
1.9 Ukuphupha ubona ilindle lomntu esidlangalaleni
1.10 Ukuphupha ungcolile ilindle lomntu (eyakho okanye yomnye umntu)
2 Ngaba eli phupha lihlala lineentsingiselo?
Ngomhla wama-11 kuMatshi 2019, 8: 35 am
Molweni ndiphuphe ndikwi bathroom yasekhaya ndabona itoilet inelindle ndayigubha kodwa ibingathi ivalekile itoilet yavele yaphuphuma yawa ilindle phantsi ndaya ngakulo. ndabamba unyawo lwam ndabe ndingafuni tu ukuba ilindle lichukumise iinyawo zam. Bekunuka kakubi.
Ngomhla wama-16 kuMatshi 2019, 3: 11 pm
Kokokwesibini ndiphupha imeko ezihlazayo ndinelindle. Namhlanje ndiphuphe ndinengxaki yokufihla ilindle lam kwindawo kawonke-wonke. Inxalenye ethile ndayicombulula ngandlel’ ithile, kodwa isiqwenga sasishiywe ndaza ndasifihla emlonyeni wam, kodwa yayingexesha elifutshane kuphela. Yayingenavumba elibi, kodwa yayindicekisa yaye ngokukhawuleza ndandiyilahla, kodwa ndawa kwi-staircase ebanzi (yayiyisakhiwo sikawonkewonke).
Ndaya kwintlanganiso kodwa ndahlala ndimamele abantu abadlula kwizitepsi bekhalazela ikaka yam. Akukho mntu wayekrokrela ukuba elo lindle lelam.